होन्डा सिटी १२५ हन्टर कब अनलाइनबाट सार्वजनिक
होन्डा विश्वमा नै उत्कृष्ट मोटरसाइकल तथा कार उत्पादनको लागि परिचित रहेको छ । विश्वमा नै होन्डाका मोटरसाइकलहरु चर्चित रहेका छन् । होन्डाले जेनेभा मोटर शो २०२० बाट विक्री सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ तयार गरेको १२५ सीसी क्षमताको मोपेड अनलाइनबाट सार्वजनिक गरेको हो ।कोरोनाको कारण जेनेभामा...
The 2020 BS6 TVS XL 100 has been recently launched. The brand further ensures that the BS6-compliant variant of the XL 100 is capable of offeringarise in the mileage by 15% when compared to the one offered by its BS4 counterpart.Equipped with EcoThrust...
सुुजुकीले आफ्नो १५५ सीसी क्षमताको क्रुजर मोटरसाइकल इन्ट्रुडर नयाँ इन्जिनमा ल्याएको छ । सुजुकीले १५५ सीसी क्रुजर मोटरसाइकल सुजुकी इन्ट्रयुडरलाई बीएस–६ इन्जिनको साथमा पेश गरेको छ । सो बाइक १ लाख २० हजार भारु एक्स सोरुम मूल्यमा भारतमा लन्च गरिएको हो । कम्पनीको यो तेस्रो बाइक...
रोयल इन्फिल्ड हिमालयन ‘स्लीट एडिसन’ नेपालमा सार्वजनिक भएको छ । रोयल इन्फिल्डको आधिकारीक वितरक विबेक अटोमोवाइलले हिमालयन ‘स्लीट एडिसन’ लाई एफआई इन्जिनको साथमा डियूल च्यानल एबीएससहित बजारमा आएको हो ।यसमा प्रयोग भएको इन्जिन पुरानै बीएस ४ मा एफआई टेक्नोलोजी थप भएर आएको हो । कम्पनीले...
The BS6 Suzuki Intruder has been officially launched. The motorcycle is available inasingle variant withafuel injection system as standard. According to the brand, they have updated the cruiser motorcycle withanew ignition system, ECU, and exhaust system to meet the upcoming BS6 emission...
बजाज पल्सर एनएस १२५ को बिक्री सुरु
बजाजले पल्सर एनएस १२५ रसियन बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । बजाज पल्सर फेमेलीकै सबैभन्दा सानो मोटरसाइकल एनएस १२५ बजाज अटोले सार्वजनिक गरेको हो । बजाज पल्सर एनएस सिरिज लोकप्रिय मोटरसाइकल रहेको छ । भारत नेपाल लगायतका बजारमा एनएस सिरिज निकै सफल मानिन्छ । कम्पनीले यो मोटरसाइकल...
सिएफ मोटो २५० एसआर मोटरसाइकल सार्वजनिक
चिनियाँ मोटरसाइकल निर्माता कम्पनी सीएफ मोटोले २५० सीसी क्षमताको नयाँ मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले स्पोर्टस मोटरसाइकल २५० एसआर सार्वजनिक गरेको हो । यो मोटरसाइकल २०१९ मा टेष्टिङको क्रममा देखिएको थियो । हाल कम्पनीले यो मोटरसाइकलको सुरुवाति मूल्य चिनियाँ यान १८ हजार ५८० तोकेको छ...
The BS6 Honda Shine 125 has been recently launched in both drum brake variant and the disc brake variant. Surprisingly, the brand has removed the ‘CB’ moniker from the name of the motorcycle. Having sold over 43 lakh units since its launch, it is the...
होन्डा मोटरसाइकल एन्ड स्कुटरले चर्चित युनिकर्न मोटरसाइकल बीएस ६ इन्जिनको साथमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सो बाइकको बीएस६ इन्जिनको साथमा मूल्य पनि बढाएको छ । सन् २००४ बाट उत्पादन सुरु भएको होन्डा यूनिकर्न नेपाली सडकमा पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको मोटरसाइकल हो । सुरु १५० सीसी क्षमतामा...